ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၁+ ၂ + ၃) (Aung Din) | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ ( ၁ + ၂ + ၃)
(၂) ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ စုစည်း ထားသော ကိုယ်စားလှယ်များအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ “တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောထား” (The Framework of Political Dialogue) သဘောတူညီချက် ရရှိရန်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် –
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ
Tags: ကချင်, ရခိုင်, အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းစစ်